Nhoroondo yaVaJoe Biden
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vebato reDemocratic Party, vari kukwikwidzana nemutungamiri wenyika, VaDonald Trump musarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi, vari kukwikwidza kechitatu musarudzo yekuenda kuWhite House, asi rwendo rwuno vari mumiriri weDemocratic Party kekutanga musarudzo yemutungamiri weAmerica.
Kana vakakunda, uye vakagadzwa muna Ndira anotevera, VaBiden vanoita mutungamiri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu. Apa vanenge vava nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa, mutungamiri wekutanga ane makore akadai, vachidarika VaTrump avo vane makore makumi manomwe nemana.
VaBiden vagara vachitaura mumwedzi yose yavange vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kutsvaga kupedza hutongi hwaVaTrump.
"Tiri kurwira hunhu hweAmerica," VaBiden vanodaro padandemutande ravo rekutsvaga rutsigiro. "Iyi inguva yekuyeuka kuti tiri vanaani. Tiri vanhu vemuAmerica: Takasimba, uye hatiori moyo, asi tizere neremangwana rakanaka. Ino inguva yekubata munhu wese zvine chiremera. Inguva yekuva nevashandi vanoshandira budiiriro yenyika yose. Inguva yekurwisa kusashandiswa zviri pamwero kwemasimba uko tiri kuona. Inguva yekutarisisa zvakadzama pamwe nekutondera kuti zviuya mberi."
VaBiden vanoshoropodza VaTrump vachiti mutungamiri asina kukodzera munyika ine hutongo hwakasununguka, vachiti "Inguva yehutungamiriri hwunoremekedzwa pasi rose uye hutungamiriri hunokudzwa muno muAmerica."
Panguva iyo pasi rose riri kutatarika nepamusana pedambudziko reCoronavirus, kutsvaga rutsigiro kwaVaBiden mumazuva ekutanga muna Chikunguru, kwanga kusina kufanana nedzimwe sarudzo dzemutungamiri weAmerica mumakore ano. VaBiden vanga vachitsvaga rutsigiro vari pamba pavo mudunhu ravo reDelaware, dzimwe nguva vachimbopinda muguta guru redunhu reDelaware, reWilmington, pamwe neguta riri pedyo, rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, vachitaura pamwe nekuzeya gwara ravo vari muzvikwata zvidiki zvevanhu
VaBiden vakaita musangano mumwe chete chete nevatori venhau mukati memwedzi mitatu sezvo vange vasingade kuita magungano makuru ekutsvaga rutsigiro nekutya kubata kana kubatsira kupararira kwe coronavirus kana vanhu vakawanda vakaungana kuzonzwa vachitaura.
Budiriro neNhoroondo yaVaBiden:
Mushure mekupedza zvidzidzo paUniversity of Delaware neSyracuse Law School, VaBiden, avo vaive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe, vakave mugore ra 1972 mumwe wevechidiki kusarudzwa kuve nhengo yedare reSeneti muAmerica. Asi masvondo mashoma vasarudzwa, vakasangana nenjodzi huru. Mudzimai waVaBiden Neilia nemwanasikana wavo aive negore rimwe aberekwa, Naomi, vakafa mutsaona yemotokari panguva yekutanga kweKisimusi. VaBiden vakambofunga kusiya chigaro chavo muSeneti kuitira kuti vachengete vamwe vana vavo vaviri, vose vari vanakomana, asi vakatanga kushandisa chitima zuva nezuva kuenda kubasa kuWashington. Chitima ichi chaitora maminitsi makumi mapfumbamwe kuenda nekudzoka, izvo vakaramba vachiita kwematemo matanhatu vari mudare reSeneti.
Makore akawanda mushure mekufa kwemukadzi wavo wekutanga, VaBiden vakasangana uye vakazoroora muzvare Jill Jacobs Tracy, uyo aida kuve mudzidzisi, uye aine mwanasikana wake akaberekwa muna 1981.
VaBiden vambokwikwidza musarudzo yekutsvaga anomirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica muna1987 na2007, asi havana kubudirira.
Mushure mekunge VaBiden vabuda musarudzo yekutsvaga achamirira bato ravo muna 2007, vaivewo mukwikwidzi, VaBarack Obama vakazokumbira VaBiden kuti vave mutevedzeri wavo. Vaviri ava vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica dmuna 2008, uye vaviri ava vakasarudzwa zvakare muna 2012, izvo zvakapa kuti VaBiden vashande semutevedzeri waVaObama kwemakore masere.
Gwara Rinobata Zviri Kunze kweAmerica:
Vari mudare reSeneti, VaBiden vaive nhengo yekomiti yakakosha yeSeneti inoona nezvekudyidzana vakashanda kaviri sasachigaro wayo. Vari mukomiti iyi, VaBiden vakapikisa hondo yePersian Gulf War muna 1991, asi vakavhotera kuti America ipinde zvichisimba muIraq muna 2003. Vakatsigira kupindira kwemauto emuAmerica pamwe neeNATO muBosnia muna 1994. Vachiri kushanda semutevedzeri waVaObama, VaBiden vakabatsira kuumba gwara reAmerica pane zvaiitika muIraq, kusanganisira kubviswa kwemauto emuAmerica muna 2011. Vakatsigirawo kupindira kwakaita mauto eNATO muLibya muna 2011.
VaBiden vakabata mamwe mabasa akakosha mumakore avo vari muSeneti, kunyanya mukugadzira mabhiri ekurwisa kuparwa kwemhosva, kusanganisira kubhanwa kushandiswa kwezvombo mudzimba kwemakore gumi kusvika 2004 asi mutemo uyu hausati wavandudzwa. Vakatsigira mitemo inoomesera vanopara mhosva dzakaipa, danho ravakati chinjeyi muhurongwa hwavo hwekukwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Iye zvino vanoti "vanhu vakawandisa vari mumajeri muAmerica - uye vazhinji vavo vanhu vatema nevanhu vane ganda rebhurauni."
VaBiden vanoti vanoti vatora mutemo unochengetedza madzimai kuti asashungurudzwe weViolence Against Women Act semutemo wakakosha zvikuru wavakabatsira kuti uvepo uyo vanoti vakabatsira matare maviri emuAmerica kuti udzikwe.
Asi vanoshorwa nemashoko avakataura paiferefetwa nhengo yebato reRepublican Party, uye vari munhu mutema, VaClarence Thomas, avo vainge vadomwa nevaive mutungamiri wenyika, VaGeorge H. W. Bush, kuti vave nhengo yedare Supreme Court mugore ra1991. Vamwe mubato raVaBiden havana kufara nedanho ravakatora, uye nanhasi inyaya inogara yakasimudza mutauro pachitariswa nhoroondo yaVaBiden.
Amai Anita Hill, gweta uye vaishanda naVaThomas, akavapomera mhosva yekuvashungurudza munyaya dzepabonde uye vakapawo huchapupu hwekuva pomera mhosva iyi asi ivo VaThomas vachiiramba. Asi VaBiden, avo vaive sachigaro wekomiti yeSeneti inoona nezvematare nemitemo, havana kubvumidza zvimwe zvapupu zvekutsigira nyaya Hill.
Masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevarwiri vekodzero vakatsoropodza kubatwa kwakaitwa nyaya iyi naVaBiden.
Mushure mezvo Seneti yakabvumira kudomwa kwaVaThomas kuva muting wedare reSuoreme Court uye vachiri mudare iri.
Muna Kubvumbi 2019,VaBiden vakafonera Hill vachikumbira ruregerero nemafambisiro avakaita nyaya yake, asi Hill haana anoti ari kugara asina kugutsikana nezvakaitika.
Zvinangwa: Kubudirira kwehutungamiri hwaVaBiden kungangotevedzera makore masere ehutongi hwaVaObama muWhite House, vaine hurongwa negwara rekusimudzira nyaya dzebudiriro pamusoro pemarudzi nezvido zvevanhukadzi muAmerica pamwe nezviga zvepasi rose. Kunyange hazvo VaTrump vakaburitsa America kubva muzvibvumirano zvekutengeserana, zvibvumirano zvezvombo zve nuclear pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze izvo VaBiden vanoti hazvina zvido zveAmerica zvakaitwa naVaTrump, VaBiden vari kutarisirwa kudzosera chimiro cheAmerica pasi rose apmwe nekuona kuti nyika iyi yatanga kutaudzana nedzimwe nyika zvine chiremera.
MuAmerica, VaBiden kwemakore mazhinji apfuura yane nemukurumbira wkushanda nevamwe zvakanaka kunyange vachibva kuRepublicans Party. Asi panguva iyo vange vachirwira kusarudzwa neDemocratic Party, VaBiden vakadududza pavakanzi vaive munhu asina kusimba zvakadzama panyaya dzekuti munhu wese ave nemafungiro ake uye asambunyikidze vamwe vachiti muna pachiitiko muna Kurume, "Ndine nhoroondo isina anoikunda pavanhu vose vari kukwikwidza." VaBiden vakasimbisa nhoroondo yehutongi hwaVaObama, kusanganisira kuwedzera rubatsiro munyaya dzehutano, kutsigira mutemo unobvumidza kuti ngochani dziroorane, uye kutsigira hurumende kuti ibatsire nemari makambani emotokari emuAmerica ainge avhiringwa nekuparara kwehupfumi hwenyika.
VaBiden vanoti VaTrump vasiya hondo yekurwisa dambudziko re coronavirus, vachitiwo "vachamisa kuita dambe rezvematongerwo enyika nekutaura manyepo izvo zvakonzera rusarura nekuita chadzimira mumafungiro evanhu." Va Biden vanoti vachaona kuti "zvisungo zvinobata hutano hweveruzhinji zvichaitwa nenyanzvi dzezvehutano kwete nevezvematongerwo enyika."
Kunyange hazvo kupopota nekubuda furo rehasha padandemutande reTwitter agara ari maitiro aVaTrump kubva pavakapinda muWhite House, kukanganwa nekurasa mukanwa kwaVaBiden kuri kupa VaTrump mukana wekushora VaBiden vachiti munhu asisina pfungwa dzakati tsvikiti nepamusara pekukwegura kwake. Masvondo mashoma apfuura, VaBiden vakati vari kupinda musarudzo yeSeneti, pane kuti vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika, vakatiwo vanhu zana nemakumi maviri emamiriyoni vafa neCovid-19 pane kuti zana nemakumi maviri ezviuru.
“Kana dai ndakambotaura zvinhu zvakapusa kudai, masangano enhau anonyepa angadai akauya kwandiri achindishoropdza zvakanyanya. Izvi zvinodarika kukanganisa kuri pamwero,” VaTrump vakanyora paTwitter.
Asi VaBiden, pavakabvunzwa kana pfungwa dzavo dzichiri kushanda zvakanaka, vakati, "Tarisa, zvose zvaunofanirwa kuita kungonditarisa uye handife ndakamirira kuenzanisa kugona kwangu kwekuziva nekugona kwemurume wandiri kukwikwidzana naye."
Vaviri ava vari kutarisirwa kusangana vachikakavadzana pasi pechirongwa chekuedzana ruzivo muhurongwa hutatu huchaitwa muna Gunyana naGumiguru.